Qiimaha dhulka iyo qaddarin la’aanta Soomaalida
Qaybtii kow iyo tobnaad
Waxaan ku bilaabaynaa Magaca Allaah ee Naxariista teeda guud iyo tan gaar ahaaneed bixiya.
Waxaan soo marnay in dhulku nolol iyo geeriba na aqbalo. Isagu maydkeena xitaa waa hayaa halka ehelkeenu na fogeeyo. Sidoo kale isaga xagiisaan ka nimid oo nala ka abuuray. Shey walba asalkiisii buu unoqdaa. Taariikhdu ma xussin dad Soomaalida dhulkeeda ka neceb waayadan dambe. Qofkii haya wax arrintaas kasoo horjeeda isagaa laga rabaa caddayn. Waxaan ognahay waddamada dariskeena ah sida Kenya iyo Itoobiya ay labaduba naga dhul jecelyihiin.
Dhulka Soomaaliyeed hadduu hadli lahaa afar waxyaalood oo xarafka “Q” ka biloowma waa ka dacwoon lahaa markuu maqlana qalbigaa xanuuni lahaa. Waa qab-qable, qabyaalad, qaad iyo qurbe. Qurbaha markaan leeyahay dhulka Islaamka qaatay dhulkeena qaraabay yihiin, inkastoo qolayaha xukamaa ay qowsaaro kale yihiin oo ay shisheeye kale qabbaan u yihiin laakiin haddaan Qowlkii Ilaahay sifiican u qaadan lahayn maanta wirwirka dhulka qalaad haamaha umaanaan qaadadeen, dhalaankeenana kuma beerneen. Meel qaad soo galay qaran kama dhismo maxaa yeelay qoysku waa qurubka uu ka samaysmo qaranku sida bulukeetiga ama dhagaxa daaraha laga dhiso oo gurigu waa dhagxaan usu tagay. Qaadku qoyskii buu qarribay oo waa dhagax qalloocan oo guri lagu dhisay mar aan dheerayna waa dumayaa. Qabyaaladu waa dhiiga ay shisheeyaha, qabqablayaasha iyo cadowga Soomaalidu ku shaqayso. Haddaan qabyaaladi jirin qabqable ma jireen. Waligiin ma aragteen qabqable qolooyin kale u dagaalamayaan? Caadaqaatuhuse qabiil ma leeyahay?
Qabqablayaasha qaarkood mar hore ayaa dhulka loo qoday oo qisadooda dhulka kama qarsoona kuwa hadda jooga iyo kulligeenba ninkii dhulka dambi ka gala wuxuu ka dhiganyahay sidii tusaalahii dawacada lagu sheego oo la yiraahdo dawacaa dhulka dayn ka qaadatay markaasay bixin wayday oo damacday inay ku booddo. Maalintii dambe ayaa dhulkii yiri dawaco daynkaygii isii. Dawacadii waxay istiri boqcaddan dhulka ah maad ka carartid markaasay xawaare ku dhufay iyadoo isleh ka fogoow si uusan mar dambe kuu waydiin. Markay daashay iyadoo neeftuuraysa oo isleh cago kuguma gaaro baa meeshay ku taagnayd tiri dacawo daynkeygii isii. Mar labaad dawacadii xawaare inta ku dhufatay bay istiri dhulku indho ma lahee maad ka dhuumatid markaasay god gashay. Iyadoo raaxo isku kala bixisay oo u qabta inay iyada iyo dhul kala badbaadeen baa godkii yiri dawaco daynkaygii isii ilayn godku waa dhulle. Haddana waa kasoo booday oo carar maagtay ilaa markii dambe naftii orod uga dhacday markay meel kasta oo ay istaagto uu dhul noqday.
Nin habaar waalid qaba hilin lalama qaado horaa loo yiri ka waran ninkii habaar dhul qaba? Hagarta dhulka laga galaa wax loo dhigo ma leh. Xisbi talada haya waa isqaban kartaan, madaxweyne waad is ka hor imaankartaan laakiin khaa’inul wadan waa arrin fidrada ka soo horjeedda inkastoo qabqablayaasha ay caadi utahay. Arag kalmada Ingiriiska lagu dhaho “treason”. Toloow Soomaaliyey ma qamar sanaaci baad raacaysaan oo dayaxaad qabanaysaan ilayn qubuuraha anaa la iga qodaaye? Waa dhici kartaa dad badan baa aaminsan in dayaxa la tagay oo ay ku jiraan dad culumo sheegta ama ducaad.
Habaarku qabqablayaasha oo kaliya kuma dhicin ee dadka qurbaha jooga oo dhan badankiisa buu saameeyey. Bal aan fiirino dhibta dadka qurbaha jooga ay naftooda ama ehelkooda u gaysteen. Qodobbada aan ka hadlaya waa kuwa badanaa caadi noqday oo aan dhib saas ah loo arag bal laga dhigtay wax caadi ah ee kama wado dhibta Qurbaha ka jirta.
1. Waxaan dheg udhigi waynay shareecada Islaamka oo diiddan degitaanka dhulka gaalada illaa dad loo cududaaray maahee. Imisa qof baa cududaar haysata?
2. Dadkeenii waxaa deeqi waayey waxay haysteen oo waxay soo dhowrayaan dibadda waxaana ugu wacan waa dadka dibadda jooga oo kaalmeeya. Marka waxaan ku caawinay in ay dhulkoodii ay dhinac maraan. Waxaad arkaysaa dad badan oo tobonaan ama boqolaal kun oo Doolar haysta oo leh waxaan u baahnahay sharci aan gatto oo aan dibad ku aado, lacagtaas tirada badan kalsooni kuma qabo maxaa yeelay annaguu noo jeedaa.
3. Qaar dadka ka mid ah waxay ka shaqeeyaan shaqooyin aan habboonayn in laga shaqeeyo sida meelaha khamriga iyo bakhtiga lagu gado.
4. Isla lacagtaas xaaraanta lagu kasbay waxay wax ka siiyaan dadkoodii waddankii joogay oo waa dhib kale oo dheeraad ah.
Kama hadlayo dhibka qurbaha oo ma ahan wax maqaal lagu soo koobi karo oo markaan qodobka koowaad burinay baa dhibtaan maanta qoysaskii haysata ka timid ilayn dadkeena waaweyn tage ee waxa dhibtu haysataa waa ubaxii berito.
Maqaalkii Maxamed Axmed oo ahaa baroordiiqda dhulka baa iiga filan inaan soo cesho waxa dhulku noo taray iyo sida uu noo soo koriyey, inuu dhulku na habaaro xaq buu uleeyahay.
Dhulku waxaad mooddaa inuu leeyahay markaad qabyaalad dayn waydeen oo xumaantii u qasaddeen oo shareecadii Ilaahay diiddeen oo culumadii wax la toogto iyo wax haddeer oo la joogo marna xabsi la dhigo marna dacaayad lagu hayo ka dhigteen ayaan sidaan noqday ilayn weel kasta waxa lagu shubto ayaa laga soo daadsadaa. Haddaad qashin qub iga dhigteen oo aad nuclear igu xabaasheen. Markaad dadkii akhyaarta ahaa aad idinka iyo caddowga ummaddu isu celceliseen ayaan aniguna saas noqday oo waxaan idiin soo saaray qabqable. Gumaystuhu waaguu ihaystay intaas oo qof qabuur uma noqon iyadoo muddaduu joogay qarni ku dhowayd idinkuna toban sano baad magaalooyin qabuuro ah aad iskaa wax u qabso ku dhisteen. Xamar toddobaatameeyadii waxaa ka socday iskaa wax u qabso laakiin sagaashamaadkii iyo hadda waxaa ka socda dagaalo iskaa wax u qabso ah oo aad isleedahay ma waxay rabaan in ay si dhaqso badan isu dhimaan ilayn waxa badanaa dagaaladu dhexmaraan waa qolooyin isku qabiil ah. Iskaa wax uqabso markaan leeyahay waa dagaal la siiyey awood dheeraad ah iyadoo ayna galin oo kaliya maleeshiyadii loogu talagay bal ay ka qaybqaateen dadkii qolooyinkaas ka dhashay sida iskaa wax u qabsada ayna ku koobnayn injineerada iyo fuundiyaasha lacagta ku qaata oo kaliya bal ay dadwaynuhu ka qaybqaataan iyagoon wax lacag ah ka rabin markaasaa howshii bil la qaban lahaa maalmo lagu qabtaa.
Haddii qabqablayaasha qardhaas loo jari lahaa oo Qur’aan la saari lahaa dadkii Quraanka saarilahaa waa seddex qolo.
. Qaar qumman oo Ilaahay qalbigooda Eebe ka cabsi dhigay laakiin iyaga iyo qabqablayaasha waxaa ka dhaxeeya il iyo aragti oo haddii la damco in ay Qur’aan ku akhriyaan waxay u qaadayaan Zenawi iyagoo is leh qarash ama qoryo uga hela.
. Kuwo qabqablayaasha ayey qabiil ku raaceen oo iyaga laftoodu Qur’aan bay ubaahanyihiin. Waa kuwa Soomaalidu tiraahdo Fiqi tolkiis kama Janno tago.
. Qolada kale waa kuwa qarash ku shaqeeya oo la iskuma halayn karo. Haddii qarash fiican la siinwaayo waxaa dhici karta inay Xirsiga wax aan la aqoon ku qoraan ama sii habaaraan sidii laga sheegay nin Masaari ah oo dadka dhinta Qur’aan ku akhriya. Badanaa haddii lacagtuu rabay la siiyo waxay ku akhriyaan Aayadaha Raxmadda ka hadla sida Aayadaha ku jira dhamaadka Suurat Al-Fajri (Yaa ayatuhannafsul mudhma’inah. Irjicii ilaa Rabbiki raadhiyatan mardhiyah) oo macnaheedu yahay: naftii xaqa rumaysaay oo xasiloonay. Unoqo Eebbahaa xagiisa adoo raalli ah, lagana raalli noqday. Maalin ayaa reero waxaa ka dhintay nin markaasaa Masaarigaa loo yeertay markaasaa wuxuu filayey la siin waayey ka dib wuxuu ula fariistay Aayadahan ku jira Suurat Al-Xaaqah (Khuduuhu faqulluuhu. Thumal Jaxiima saluuhu. Thuma fii silsilatin darcuhaa sabcuuna …… ilaa aakhirka aayadahaas) oo ah: qabta oo luquntiisa iyo qoortiisa isku xira. Naarta Jahannamo galiya. Markaas galiya silsilad toddobaatan dhudhun ah. Waa Aayado ka hadlaya sida Ehlu-Naarka loo cadaabo. markaasaa dadkii hal mar qaylsheen oo dhaheen sug shiikh markaasay lacag kale ugu dareen kadib buu Aayadihii Raxmadda lakala baxay.
Runtii habaarka dhulku waa nahaystaa. Miyeydaan arag dadka waalan oo shakkiga qaba waxay ka didaan lama marsiin karo. Hadda dadwaynihii Soomaaliyeed cirroole iyo Carruurba dibad bay rabaan! Sidoo kale qabqablayaashiina waa diidanyihiin in ay dhulkooda ku shiraan oo waxaa kasoo haray inay ku wareegaan dhulal aan kuweena sidaas uga hormarsanayn.
Shakkiga Dhulkeena aan ka qabno waa inaan iska shaafinno oo aan dhulka la garnaqsanno. Waa qaybta ku xigi doonta haddii Allaha awoodda lihi ogolaado.